ओलीजीले म सच्चिन्छु भनेपछि विद्या राष्ट्रपतिमा दोहोरिनुभयो – News Portal of Global Nepali
12:30 AM | 6:15 AM
08/03/2018 मा प्रकाशित
युवराज ज्ञवाली, उपाध्यक्ष नेकपा एमाले
एमाले माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकतासँगसँगै शक्ति सन्तुलित गर्दै राज्यका महत्वपूर्ण पदहरु एकअर्काले लिने सहमतिसँगै अहिले वाम एकता बढिरहेको छ । वाम एकताका लागि बनेको कार्यदलले विभिन्न किसिमको काम गरिरहेको छ । पछिल्लो समय जुन किसिमको भागवण्डा र नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यस विषयमा राज ढुंगानाले युवराज ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानी–
० राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका बारेमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल भएछ नि ?
– प्रधानमन्त्ती निवास बालुवाटारमा राति १ बजेसम्म पार्टीको बैठक चलेको थियो, स्वभाविक रुपमा हामीले गम्भीर रुपमा छलफल गरेका हौं । पार्टीमा कुनै नेतालाई कुनै पदमा पु-याउँदा हामी कसरी जानुपर्ने हो, पार्टी कसरी चलाउनुपर्ने हो, मन्त्री छान्दा वा मान्छे पु¥याउँदा छलफल हुन्छ, हामीले पनि गम्भीर ढंगले छलफल ग-यौं ।
त्यसकारण पहिले पार्टीलाई बलियो र एकताबद्ध बनाऔं । माओवादी र हामीबीच एकता हुँदैछ, त्यसलाई अझ व्यवस्थित बनाएर लैजान जरुरी छ । फराकिलो दृष्टिकोणका आधारमा अगाडि बढौं । कुनै गुटगत मान्यता र पूर्वाग्रहका आधारमा नचलौं ।
केही कमीकमजोरी हामीबाट भएका छन् भन्ने महसुस नेताहरुले गरे । आइन्दा हामीले गल्ती दोहो¥याउनु हुँदैन, हामी ठीक ढंगले जानुपर्छ । पार्टीभित्र बहस विवाद हुन्छ, त्यसलाई समाधान गरेर जानुपर्छ ।
अन्त्यमा झलनाथजीले म पनि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन्छु भन्नुभएको थियो, वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई पनि उम्मेदवार बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चल्यो । एकजना महिला हो, थोरै समय मात्रै राष्ट्रपति हुनुभयो, उहाँलाई दोहो¥याउन ठीक हुन्छ भनियो ।
० विद्यालाई राष्ट्रपति बनाउन के कुरामा सहमति भयो ?
– अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यत्ति धेरै नेताका बीचमा मबाट कमीकमजोरी भएको छ भने सच्चाउँछ भन्नुभयो । मिलेर, मिलाएर अझ घनीभूत छलफल गरेर हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो । अगामी दिनमा हामी कसरी जाने हो, हामी फेरि बैठक बसेर छलफल गरौंला, अहिले राष्ट्रपतिका विषयमा टुंग्याउँ भन्ने कुरासमेत भयो । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले यति कुरा भनिसकेपछि अरुले नाइनास्ती गर्ने हुँदैन ।
० विद्यालाई नै राष्ट्रपतिमा दोहो-याउँदा कस्तो सन्देश गयो ?
– जसलाई जे मन लाग्छ, त्यही गर्न सक्छ, तर त्यो केही समयका लागि मात्र हो । कम्युनिष्ट पार्टीमा सक्रिय रुपमा मैले काम गरेको ४५ वर्ष भयो । पुष्पलाललगायत धेरै नेताहरुको संगत गरेको छु, देखेको छु, बुझेको छु । त्यत्ति सजिलो छैन, एकपटक म शक्तिमा आएँ, मसँग बहुमत छ भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउँछु, सक्छु भन्ने दम्भ र अहँकार बढ्यो भनेदेखि त्यो अहँकारले पतनतिर डो¥याउँछ । हामी र हाम्रा नेतालाई यी सबै कुरा थाहा छ । त्यसकारण असाध्य गम्भीर भएर चल्नुपर्छ ।
– हो, अहिले त्यस्तो परिस्थिति देखिएको छ । खाइहालौं, गरिहालौं, कांग्रेसले पनि पटक पटक बहुमत ल्याएकै हो, मन्त्री पटक पटक भएकै हुन् । आजीवन मन्त्री हुने मान्छे त्यहाँ थिए । आखिर चल्दो रहेनछन त, त्यसबाट एमालेले पाठ सिक्नु पर्दैन । मलाई लाग्छ, हामीले शिक्षा लिन्छौं ।
– पार्टी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भनेर हामीले छलफल र बहस गर्दै आइरहेका छौं । आज नयाँ परिस्थिति आएको छ, दुईवटा पार्टी एक हुने निश्चित भइसक्यो । यसलाई २२ अप्रिलका दिन हामी घोषणा गर्दैछौं । दुईवटा पार्टीलाई कसरी जोड्ने त्यसबारे एक्ससाइज भइरहेको छ । पार्टी एकता ऐतिहासिक सफलता हो, तर त्यो धेरै चुनौतिपूर्ण छ । संकीर्ण र गुटगत मानिसकताबाट आग्रह, पूर्वाग्रह राखेर चल्ने हो भने पार्टी भद्रगोल हुन्छ ।